ကမ္ဘာပတ်ချင်သူတွေအတွက် အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ (၁၉၆) နိုင်ငံအထိ ကမ္ဘာပတ်ပြီးသူလေးရဲ့ အကြံပေးစကား (၃) ခွန်း….
July 6, 2019 Thuta Star 0
ကိုယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံက နေရာ ၁၀ နေရာတောင် မရောက်ဖူးသေးတဲ့အချိန်မှာ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် အမေရိကန်နိုင်ငံသူ Lexie Alford ကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၅ နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံငယ်လိုဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတစ်ခု၊ စုစုပေါင်း ၁၉၆ နေရာကို ကမ္ဘာပတ်ပြီးနေပါပြီ။ ဒီအကြောင်းကို အသက် ၂၁ […]
ကွာရှင်းတဲ့သတင်းထွက်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပရိသတ် ရှေ့ကို ထွက်လာတဲ့ Song Hye Kyo
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Song Hye Kyo ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Song Joong Ki နဲ့ ကွာရှင်းတော့မယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေအားလုံးသိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၂ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မျှသာ ကြာမြင့်လိုက်တဲ့ သူတို့စုံတွဲဟာ လက်ထပ်ချိန်တုန်းကလည်း ပရိသတ်တွေကို အံ့သြ၀မ်းသာဖြစ်စေခဲ့သလို ကွာရှင်းတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း […]
” Breaking News !!! ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း ပုဂံကို သွင်းလိုက်ပြီ” ….
အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံမြို့တော် ဘာကူမြို့မှာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေတဲ့ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကော်မတီရဲ့ ၄၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမြို့ကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းသွင်းလိုက်ပါပြီ။ Credit – Myo Swe Than Team (ရိုးရာလေး) […]
Victoria မေမေမျက်ရည်ကျပြီးပြောပြတဲ့ ခံစားချက်တွေကြားသိရပြီး မျက်ရည်ကျတဲ့အထိခံစားခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ချစ်သုဝေ….
ခေတ်၊သစ်တို့ရဲ့ မေမေချစ်သုဝေကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ သူမရဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တိုင်းကချစ်နေရတာပါ။ ကလေးအမေလို့ထင်မှတ်စရာမရှိရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပီပြင်ကျွမ်းကျင်ရုံမကပဲ အဆိုဘက်မှာလည်း ပါရမီရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လတ်တလောမှာဖြစ်နေတဲ့ နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေရတာပါ။ သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးဟာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ထွက်ရှိသမျှသတင်းတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဝေမျှပေးနေတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းကလည်း ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး […]
သားဖြစ်သူရဲ့ကွာရှင်းမှုက သူကိုယ်တိုင်နဲ့ ကာယကံရှင် Song Joong Ki ရဲ့အပြစ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ Song Joong Ki ရဲ့ဖခင်…
Song Joong Ki ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Song Yong Gak ဟာ သားဖြစ်သူ Song Joong Ki နဲ့ ချွေးမဖြစ်သူ Song Hye Kyo တို့ရဲ့ ကွာရှင်းတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ပြီး ၈ ရက်အကြာမှာတော့ သူ့ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေထံကို စာတစ်စောင်ပေးပို့ပြီး ထွက်ပေါ်နေတဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့ […]
ဗစ်​တိုးရီးယား​ ကိစ္စအတွက် လာရောက်စုံစမ်းသူများ နေစရာအခက်ခဲရှိပါက ​နေပြည်​​တော်​ ရှိ ​ကျောက်​စိမ်းတည်းခိုခန်း မှ တစ်​ဦးလျှင်​ ၂ ရက်​အခမဲ့တည်းခိုခွင့်​ပြုမည်…
” သမီးလေး ဗစ် တိုးရီးယား ကိစ္စအတွက် လာရောက်စုံစမ်းသူများ နေစရာအခက်ခဲရှိပါက နေပြည် တော် ရှိ ကျောက် စိမ်းတည်းခိုခန်းမှ တစ် ဦးလျှင် ၂ ရက် (မနက် စာ အပါအဝင် ) အခမဲ့တည် […]
နာကျင်စေတဲ့ အချစ်ရေးကို အဆုံးသတ်လိုက်သင့်ပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာရပ် (၇) ခု..
နှစ်ဦးသား အတူတူ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်လှပါဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို အမြဲ စိတ်သောကပေး နာကျင်နေစေတဲ့ အချစ်ရေးဆိုရင် ဆက်ပြီး ဖက်တွယ်ထားရမှာလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော သူ့ကိုရော နာကျင်စေတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ဖက်တွယ်ထားမယ့်အစား လက်လွတ်လိုက်တာကမှာ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်… […]
မျိူးစန္ဒီကျော်နဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ တို့ ကလဲ ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် ဆန္ဒပြနေကြပြီ….
သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကြသူတွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင် မျိုးစန္ဒီကျော်နဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ တို့လည်း ပါဝင်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေနဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်တို့ အနုပညာ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်က သက်ငယ်မုဒိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆန္ဒပြခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ […]
သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီးယားရဲ့ကိစ္စဟာအွန်​လိုင်းတိုက်​ပွဲမဟုတ်​ပဲ နှလုံးသားချင်းတိုက်​တဲ့ပွဲလို့​ပြောပြလာတဲ့လင်းလင်း ….
တပ်မတော်ကစစ်သားကြီးတွေမှာလဲ သားသားမီးမီးတွေရှိပါတယ်။ ရဲဌါနက ရဲသားကြီးတွေမှာလဲ သားသားမီးမီးတွေရှိပါတယ်။တရားရေးဥပဒေမဏ္ဍိုင်မှာလဲ သားသားမီးမီးတွေရှိပါတယ်။ နိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့လူကြီးတွေမှာလဲ သားသားမီးမီးတွေရှိတယ်။ ပါတီမျိုးစုံက လူတွေဆီမှာလဲသားသားမီးမီးတွေရှိတယ်။ ရပ်ဝန်း,ဘာသာ မျိုးစုံမှာလဲရှိတယ်။ အဲဒီသားသားမီးမီးတွေဟာ သားသမီးလိုတမျိုး၊တူ,တူမလိုတမျိုး၊မြေး လိုတမျိုး၊ အိမ်နီးချင်းလို တမျိုး ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိနေကြတာပါ။ နိုင်ငံရေးမှာတော့ ညှိဖို့ခက်ခဲလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်ကခန့်တဲ့ ကာကွယ်ရေး၊ […]